Monday January 17, 2022 - 08:33:21
Caabuqa halista ah ee Covid19 ayaa labakaclayntii 4aad si xowlli ah uga wada daafaha caalamka isagoo dhinaca dhulka udhigaya malaayiin ruux.
Corona Virus ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay dilay kumanaan kun oo ruux isagoona soo ritay malaayiin qof sida uu faafiyay Website-ka Worldometer ee diiradda saara faafintaanka safmarka Covid19.
Lagasoo bilaabo gelinkii dambe ee maalintii Axadda ayuu Covid19 si aan horay loo arag ugu faafay caalamka, tirada cudurkan ugu dhimatay adduunka ayaa kor udhaaftay 5 malyan iyo 555 kun oo ruux halka dadka uu soo ritay ay ka gudbeen 327 malyan iyo 486 kun oo bukaan.
Dhaqaatiirta caafimaadka ayaa sheegaya in Fayruska Omircon uu ugasii daray faafitaanka Covid19 waxaana laga digayaa in dowladaha caalamka ay markale soo rogaan xaalado xanibaad guud ah.
Dalka Mareykanka ayaa wali hoggaaminaya dalalka ugu dhimashada iyo bukaannada badan caalamka,warbixinnadii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dhimashada Corona Virus ka dhalatay ay dalka Mareykanka gaartay 873 kun oo ruux halka bukaanadu ay ku ku dhowyihiin 67 malyan oo ruux.
Gobolka California ee dalka Mareykanka waa meesha ugu daran ee Coronka uu dadka ku asiibayo, guddiga caafimaadka gobolka ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in ay diiwaan geliyeen inkabadan 6.8 malyan oo bukaan.
Dhinaca kale maamulka Yahuudda ayaa ku dhawaaqay iyo Covid19 uu haleelay afhayeenka rasmiga ah ee ciidamada Yahuudda.